BKP Economic Advisors Inosvika pakugadzwa kweChina chekutumira kunze kuCameroon - TELES RELAY
HOME » upfumi BKP Economic Advisors inoda kuti kugadziriswa kwebazi rinotengeserana kuCameroon
BKP Economic Advisors Firm Call for the Establishment of an Export Agency in Cameroon
(Kuisa muCameroon) - Mharidzo yaro yakabudiswa pamusoro pemigumisiro yeConstitution Partnership Agreement (EPA) pakati peCameroon neUnited Kingdom, iyo yeGermany yakasimba BKP Economic Advisors inoratidza zvimwe zvipingamupinyi zvine chokuita ne nzvimbo yebhizimisi munyika.
Pakati pezvinetso izvi, BKP Economic Advisors inoti "Cameroon haina mari yekubhadhara kana kutengesa inishuwarenzi inoshandiswa sezvikwata zvakadai seEex-Bank kuvhara dzimwe njodzi dzine chokuita nekunze kwekutengeserana".
Mukuwedzera, inodaro mushumo, chikoro chekutsinhanisa kwenyika chakanyatsogadzirira kugadziriswa kwebazi rekutengeserana, asi chimiro ichi hachisati chashanda. Uye zvivako semakamuri edzimba anoita basa iri rekusimudzirwa kwezvematongerwe enyika ari kutarisana nematambudziko makuru ezvemari, kudzivirira kuti vasati vatiza basa rakadaro zvakanaka. Mukuwedzera, hupfumi nemabasa ekutengeserana kwemahofisi ezvematongerwe enyika vane simba muhutano uye havaiti zvakakwana basa ravo rekutengeserana kwebhizimusi mune zvekutengeserana kwemisika.
Mukuwedzera, kutengeserana kwekutengesa kwakaoma uye kunodhura. Inodaro mushumo we2019 weWorld Bank Doing Business, BKP Economic Advisors anoona kuti zvinodhura uye kunonoka pakudzinga zvinhu zvekutumira kuCameroon zvinoramba zvakakwirira. Cameroon inotora 186e inoratidza 190 pamuchina wekutengeserana-muganhu. Iyi nheyo, maererano neyo firm, inoratidza zvipingamupinyi zvekuisa / kutumira mabasa.
Zvechokwadi, ndizvo zvinotaura German rakasimba, imwe ekisipota muCameroon anotora Paavhareji 202 maawa kuita muchinjikwa pamuganhu kutengeserana nzira kuti mari USD 983 (anenge 573 000 FCFA). Nepo avhareji dzakakomberedza dzemusub -Saharan Africa ndiyo 97,3 maawa ari vachikanganisa USD 605,8 (pamusoro 353 000 FCFA). In zvaidiwa zvinodiwa mapepa, unofanira kuenda uye vanopedza maawa 66 306 USD (178 000 CFA) muCameroon kuzorwa 72,8 168,8 maawa uye USD (pamusoro 98 000 FCFA) dzakakomberedza dzemusub -Saharan Africa azvaitwa.
[Tribune] Ivorian entrepreneurs, tevera muenzaniso wevanhu veLebanese! - YoungAfrica.com
Socapalm muCameroon ndiyo inonyanya kubhadhara Africa Socfin subsidiary pa 1er 2019 quarter